သွားဝါခြင်းဖြစ်စေနိုင်သော သင်မထင်ထားတဲ့ အကြောင်းရင်းများ | Mizzima Myanmar News and Insight
သွားဝါခြင်းဖြစ်စေနိုင်သော သင်မထင်ထားတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
လှပဖြူစင်တဲ့သွားတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဟာ လူတိုင်းရဲ့အိပ်မက်ပါ။ ဒီလိုလှပဖြူစင်တဲ့ သွားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ရတာက ဈေးဝယ်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံရတဲ့အခါ၊ သို့မဟုတ် သင့်သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိစေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲအချို့သောစားစရာတွေနဲ့ အခြားသော ပြင်ပအကြောင်းအရာတွေကြောင့် သင့်သွားတွေဟာ သင်ထင်ထားသလောက် ဖြူစင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုတာနဲ့ မဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဆိုတာကို မသိသေးရင် ဒီစာလေးကသင့်ကို ကူညီနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများ
သင့်သွားတွေပျက်စီးသထက် ပျက်စီးလာစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းရင်းတွေများစွာရှိတဲ့အထဲကမှ အချို့အကြောင်းအရာတွေကိုအောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။1. ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
စီးကရက်တွေနဲ့ ဆေးတံသောက်တဲ့ခါမှာ ထည့်ပေးရတဲ့ ဆေးရွက်ကြီး (tobacco products)တွေကို စွဲလမ်းနေပြီးပုံမှန်သောက်နေရင်တော့ ဒါတွေကသင့်သွားတွေကို အန္တရာယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သွားချေးတွေစုပုံလာမှုနဲ့ သွားချိုးတွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့အတွက် အစာစားပြီးတိုင်းမှာပုံမှန် သွားတိုက်တာ၊ ကြိုးကိုအသုံးပြုပြီး သွားကြားထိုးတာနဲ့ ပါးစပ်ဆေးတာ(အာလုပ်ကျင်းတာ)မလုပ်ဘူးဆိုရင် သင့်သွားတွေကို အရောင်ပြောင်းသွားစေပါမယ်။3. ဖျားနာခြင်း
သွားအရောင်ပြောင်းလဲခြင်းဟာ တစ်ခါတလေမှာ ကင်ဆာဓါတုဆေးကုထုံး (သို့မဟုတ်) ကင်ဆာဓါတ်ရောင်ခြည်ဆေးကုထုံးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။4. အစားအစာ
ခရမ်းချဉ်သီးတွေ၊ ဟင်းခတ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဘယ်ရီသီးတွေအစရှိတဲ့ စားစရာအမျိုးမျိုးကလည်းသွားတွေကိုပျက်စီးစေပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့စားစရာဖြစ်တဲ့အရွက်သုပ်လိုစားစရာမျိုးကတောင် သင့်သွားကိုအကျည်းတန်စေမယ့် အရောင်တွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။5. သောက်စရာများ
သင့်သွားတွေကိုပျက်စီးစေနိုင်ဆုံးသောလူကြိုက်အများဆုံးသောက်စရာဆိုရင်တော့ ကော်ဖီနဲ့လက်ဖက်ရည်ကိုပြရမှာပါ။ အခြားသောက်စရာတွေဖြစ်တဲ့ ဝိုင်ဖြူ၊ ဝိုင်နီ စတာတွေလည်းသွားပျက်စီးစေနိုင်တဲ့ထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။6. မတော်တဆမှုများ
သွားအရောင်ပြောင်းခြင်းဟာရေထဲမှာ သဘာဝအတိုင်းကို fluoride ပမာဏမြင့်တက်နေခြင်း၊ fluoride ပါဝင်တဲ့အသုံးအဆောင်များ ဥပမာပလုပ်ကျင်းဆေးရည်၊ သွားတိုက်ဆေးနဲ့ fluroide ပါဝင်တဲ့သောက်ဆေးတွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကုထုံးများ
မှန်ကန်တဲ့ သွားတိုက်နည်းနဲ့ သွားကြားထိုးနည်း(ကြိုးကိုအသုံးပြုသော) တွေကိုအသုံးပြုပါ။
သွားဆရာဝန် ဆီမှာသွားအရောင်တင်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
စီးကရက်၊ ဝိုင်နဲ့ အခြားသောအရက်ပါဝင်တဲ့ သောက်စရာတွေကို ဖြတ်လိုက်ပါ။
ဒါတွေအပြင် ရှောက်သီး၊ စတော်ဘယ်ရီနဲ့ လိမ္မော်ခွံတို့ကိုအသုံးပြုပြီး သွားဝါခြင်းကိုကုသနိုင်ပါသေးတယ်။
သွားဝါခြင်းမဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးရမယ့် အဖြေတွေကသိပ်ကိုရိုးစင်းလွန်းပါတယ်။ ဒီရိုးရှင်းတဲ့အချက်လေးတွေကပဲ သွားဝါခြင်းကိုပျောက်စေနိုင်တဲ့အပြင် မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီး သင့်ရဲ့ရုပ်ရည်သွင်ပြင်ကို ပိုပြီးတိုးတက်လာစေမှာပါ။
တပ်မတော်ရဲ့ ဝင်ငွေရ လမ်းကြောင်းတွေကို သပိတ်မှောက်ဖို့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင...
မြန်မာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအပေါ် ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအစိုးရများက ရှုတ်ချ
ထိုင်း၊ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့ ဘန်ကောက်မှာ...
၀၅.၀၂.၂၁ သောကြာနေ့ နေ့လယ်ခင်းသတင်းများထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်
၂.၂.၂၀၂၁ ရက်နေ့ နေ့လယ်ပိုင်း နောက်ဆုံးရသတင်းများ တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့...